ကား, Saloon ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
BMW Honda Mazda Mercedes-Benz Nissan Renault Suzuki Toyota
Root Category (555)
ခရမ်းရောင် / ပန်းရောင် (1)
A/C: Front (153)
A/C: Rear (68)
Cassette Radio (153)
Toyota Vios G Grade Auto 2017 (+Tax)
Lks 298 ညှိနှိုင်း
Toyota VIOS G Grade Auto 2017 selling price at USD 21,800 at exchange rate 1370 MMK + Tax.Price can be changed due to exchange rate.Engine : 1NR-FE (1.3L, Petrol, 16 valve, Dual VVTI)Transmission...
Toyota Camry 2017 (+Tax)
Lks 739 ညှိနှိုင်း
Toyota Camry 2017 selling price at USD 54,000 at exchange rate 1370 MMK + Tax .Price can be changed due to exchange rate.Vehicle Type : SaloonEngine : 2AR-FEFuel Type : PetrolDisplacement : 2.5LT...
Dark blue Mercedes-Benz E 200 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,Original TV,Navigation System,Power Locks,Power Steerin...
Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON G 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steerin...
Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering...
Pearl white Toyota Mark II 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON G 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steerin...
Lks 430 ညှိနှိုင်း
Pearl white Toyota Crown ROYAL SALOON G 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steerin...
Pearl white Toyota Celsior 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Mercedes-Benz CLA 180 Turbo 2014
Silver Mercedes-Benz CLA 180 Turbo 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering,Sma...
Toyota Premio C-Package 2001
White Toyota Premio C-Package 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် CT211-0004793) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည...
Silver Toyota Premio 2010 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် ZRT260-3068330) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပ...
Pearl Gold Toyota Mark II 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံ...
Silver Toyota Mark II 2001 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံ...
Lks 355 ညှိနှိုင်း
Black Toyota Crown 2004 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု...
Pearl White Toyota Mark II 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Pearl White Toyota Mark II 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Lks 178 ညှိနှိုင်း
Pearl White Toyota Belta 2009 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
Pearl White Toyota Mark II 1999 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလု...
Pearl White Toyota Corolla Axio 2014 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင...
Silver Toyota Premio 2002 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလုံခြုံမ...
Pearl White Toyota Crown 2003 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front,A/C: Rear,TV,Navigation System,Power Locks,Power Steering. ဘေးကင်းလြုံ...
မြန်မာပြည်မှာ ရွေးချယ်ဝယ်စရာ ဆလွန်းကားတွေ အများကြီးပါပဲ။ အဓိကအားဖြင့် ဆလွန်းကားသစ်နဲ့ တစ်ပတ်ရစ် ဆလွန်းကားဆိုပြီးတော့ ကွဲပြား နိုင်ပါတယ်။ ဆလွန်းကားရဲ့  ရည်ရွယ်ချက်က တစ်ကိုယ်ရည်သုံး၊ မိသားစုသုံးဖို့အတွက် ဖြစ်ပြီး အရွယ်အစားပုံစံက ၄ ဦးဝန်းကျင်လောက်သာ ဆံ့မယ့် အနေအထား တစ်ခု ပါပဲ။ ဆလွန်းကားကို ရွေးဝယ်သူ အများစုက မြို့ တွင်း သုံးဖို့ အတွက် ဖြစ်ပေမယ့် ခရီးဝေးမှာလည်း အသုံးပြုနေကြ ပါသေးတယ်။ သူက မြေပြန့်ဒေသအတွက် အသင့်လျော်ဆုံး ကားပုံစံ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ အမြင်ရ အများဆုံး ကတော့ တိုယိုတာ ဆလွန်း ကားများ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုယိုတာထဲမှာကိုမှ တိုယိုတာ ခရောင်း ၊ လက်ဆက်စ် တို့က အမြင်ရ အများဆုံး တိုယိုတာ ဆလွန်း ဖြစ်ပါတယ်။ နစ်ဆန်း ဆလွန်း နဲ့ တောင်ကိုရီးယား တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ ဟွန်ဒိုင်း ၊ ကီရာ တို့ရဲ့  ဆလွန်းများကိုလည်း မြင်တွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုက တစ်ပတ်ရစ်ကားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း အသစ်ကား ရောင်းချဖို့ ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဂျာမနီ မာစီဒီး ကတော့ ဆလွန်းကားသစ်တွေ ရောင်းနေပါပြီ။ အမ် စီးရီး၊ အက်စ် စီးရီး၊ အီးစီးရီး အပြင် စီးရီးပေါင်း မြောက်များစွာကို မြင်တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ချိန်က တစ်ပတ်ရစ် ဆလွန်းကားတွေ ဂျပန် လေလံဈေးကနေ ဝယ်တော့ သင်္ဘောနဲ့ သယ်ပါတယ်။ သင်္ဘော ပေါ်မှာ ထိခိုက်မှုကြောင့်လည်း ကားက ပစ္စည်းတွေ ပျက်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါကလည်း ဂျပန် လေလံ ကနေ တိုက်ရိုက်ဝယ်သူများအတွက်ပါ။ အချို့ ကျတော့လည်း အရောင်းစင်တာတွေကနေ တိုက်ရိုက် ကြည့်ပြီး ဝယ်ယူကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲစားတန်းကနေ ဝယ်ယူခြင်းကတော့ အတော်လေး ပါးနေပါပြီ။ မြန်မာပြည်က လူစီးများ ဆလွန်းကား အကြောင်းပြောပါဆိုရင် အားလုံးက ခရောင်းကို သိများကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ်က ၂ထောင်စီစီ ဝန်းကျင်ဆိုတော့ ဆီစားက အနေတော်ပါပဲ။ ဓာတ်ဆီကားများကို ပိုမို မြင်တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တက္ကဆီ ပြန်လုပ်သူအချို့ ကတော့ ဂက်စ်ကား ဖြစ်အေင် ပြန်လည် ပြုပြင်တာတွေ ရှိပါတယ်။
ဆလွန်းကားကတော့ ရန်ကုန်မှာ အများဆုံးပါပဲ။ ရွေးချယ်စရာ ဆလွန်းကား အစုံကိုလည်း Motors.com.mm မှ ဖော်ပြထား ပါတယ်။ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ဥရောပ၊ အမေရိကန် အစုံအလင်ဆုံး ဖြစ်အောင် ထည့်သွင်း ပေးထား တာမို့ အသုံးပြုလို့ အဆင်ပြေစေဖို့ မျော်လင့် ပါတယ်။